Usoro 6 Teknụzụ na 2020 Ọhịa ọ bụla Kwesịrị Knowmara Banyere | Martech Zone
Usoro 6 Teknụzụ na 2020 Ọhịa ọ bụla Kwesịrị Knowmara Banyere
Ọ bụghị ihe nzuzo na usoro ịzụ ahịa na-apụta na mgbanwe na ọhụụ na teknụzụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ka azụmahịa gị pụta, weta ndị ahịa ọhụụ ma bulie visibiliti n'ịntanetị, ịkwesịrị ịdị na-eme mkpamkpa banyere mgbanwe teknụzụ.
Chee echiche banyere usoro ntanetị na ụzọ abụọ (na uche gị ga-eme ọdịiche dị n'etiti mkpọsa na-aga nke ọma na crickets na nyocha gị):
Ma ọ bụ mee ihe iji mụta usoro ndị ahụ ma tinye ha n'ọrụ, ma ọ bụ hapụ gị n'azụ.
N’isiokwu a, ị ga-amụta maka usoro mgbasa ozi ọhụụ ọhụrụ ọhụụ banyere afọ 2020. Jikere ịmalite? Nke a bụ usoro na ngwaọrụ ị ga-achọ iji kụrụ ala na-agba n'afọ a.
Ndzọ nke 1: Azụmaahịa Omnichan Ogologo Oge, Ọ Dị Mkpa
Ruo ugbu a, ndị ahịa enweela ihe ịga nke ọma na-elekwasị anya n'usoro ntanetị ole na ole iji biputere na itinye aka na ya. O di nwute, nke a abughi ikpe na 2020. Dịka onye na-azụ ahịa azụmaahịa, ị nweghị oge iji biputere ọdịnaya na ikpo okwu ọ bụla. Kama ịmepụta ọdịnaya maka ọwa ọ bụla, ịnwere ike weghachite ọdịnaya ma tinye ya na chanel obula. Nke a agaghị eme ka ozi ahia gị sie ike, mana ọ ga - eme ka azụmahịa gị baa uru ma soro ndị obodo gị na - eme ihe.
Ahịa Omnichannel na-enyere ndị na-ege gị ntị aka ileta ọwa gị n'enweghị nsogbu. Nsonazụ ahụ?
Obe uzo ahia ruru ihe ruru ijeri $ 2.
Njikere ịhụ ahịa omnichannel na arụ ọrụ? Lelee otu isi ndị ahịa US, Nordstrom, mejuputa ahia uzo ahia:
Nordstrom Pinterest, Instagram, na Facebook ihe ndekọ niile nwere ihe ntinye ederede pịa na mmụọ nsọ.
Mgbe ndị mmadụ na-enyocha ihe ndekọ mgbasa ozi mmekọrịta ọ bụla nke Nordstrom, ha nwere ike ịzụ ahịa posts nke na-eduga ha na weebụsaịtị Nordstrom.
Ozugbo ha rutere saịtị ahụ, ha nwere ike ịtọọ oge ị ga-eme styling, budata ngwa Nordstrom ma nweta ohere ịkwụ ụgwọ maka iguzosi ike n'ihe.
Ahịa Omnichannel na-etinye ndị ahịa na mmiri mmiri nke ọdịnaya, ọrụ ndị ahịa, ahịa na ụgwọ ọrụ.
Ozi ahụ na-ada ụda ma doo anya:
Na 2020, ikwesiri ilekwasị anya na azụmaahịa omnichannel. Mbuli elu nke ahia dijitalụ na mgbasa ozi mmekọrịta emeela ka ọ dị mkpa maka ngwaọrụ mbipụta akpaaka. N'ikwu eziokwu, ndị nwe ụlọ ahịa na ndị na-ere ahịa enweghị oge ọ bụla ịdebe kwa ụbọchị na ọtụtụ nyiwe.
Tinye: Okike ọdịnaya, na-eweghachi ma na-ebipụta ngwaọrụ site na Akwụkwọ Mbisa. Ọbụghị naanị na ị nwere ike ịmepụta ọdịnaya, mana ị nwere ike imegharị ya n'ọtụtụ akụkụ dị ka Instagram posts ma ọ bụ Facebook kesara onyonyo na ịga. Daashi? Ọ bụ n'efu. Mana ezughị iji mepụta ọdịnaya, ịchọrọ ibipụta ya.
Iji chekwaa oge, mepụta ọdịnaya gị na ibipụta ọrụ ọnụ. N'otu oge, ịnwere ike ịmepụta ọdịnaya anya ma dezie ya ka ọ bipụta onwe ya na ọwa ọ bụla. Site na ịhazigharị atụmatụ na agagharị na mbipụta akpaaka site na iji ịpị dị mfe, ị na-echekwa oge, ego ma debe akara gị ka ọ dị mkpa.
Ahịa Omnichannel dị ka ebe niile na ntanetị, nke ahụ bụ mgbanwe teknụzụ 2020 ị nweghị ike ileghara anya.
Ndzọ 2: Ọdịnihu nke Ahịa vidiyo
Ire ahia vidiyo buzzword n’oge na-adịbeghị anya, mana ọ bara uru na mkpirisi niile ahụ? Tụle na ihe karịrị ọkara nke ndị mmadụ na-ekiri vidio kwa ụbọchị, dị ka ọnụ ọgụgụ ahịa vidiyo si HubSpot, M ga-asị na ọ bụ ụda olu ee. Kedu ụdị ọdịnaya ndị mmadụ na-ekiri? Youtube anaghịzi achịkwa dị ka mgbasa ozi vidiyo Facebook, Akụkọ Instagram na Live na-eto eto na ewu ewu.
The isi ihe dị na ahịa vidiyo dị irè bụ ịhazi onwe. Ndị mmadụ enweghị mmasị na ikiri vidiyo mara mma, vidiyo echekwara ọzọ. Kama nke ahụ, ha na-achọ ọdịnaya vidiyo nke na-emetụta ọdịmma ha. Vidio ndị buru ibu bụ ụzọ dị mma iji jikọọ na ndị na-ege gị ntị ma kesaa akụkụ chiri anya nke ika gị.
Ma echegbula, ịkwesighi onye nlere vidio ọkachamara ka ịmepụta ọdịnaya vidiyo. Nwere ike mfe nka dị mkpa na-ekere òkè videos site ọkọ, ma ọ bụ site na ndebiri vidiyo na PosterMyWall. Mepụta vidiyo iji dozie ozi akara gị, kwalite mmalite ngwaahịa ma ọ bụ gwa ndị na-ege gị ntị banyere akụkọ ụlọ ọrụ.
Nke a bụ otu Mfe PosterMyWall bụ:
Chọọ vidiyo ndebiri iji chọta nke dabara na ụda na ozi nke ika gị
Pịa na imewe hazie template
Jiri nchịkọta akụkọ iji hazie nnomi, agba, mkpụrụ akwụkwọ na nhazi
Kekọrịta vidiyo ozugbo na ntanetị gị na PosterMyWall
Naanị usoro dị mfe anọ, ị nwetara vidiyo akara iji kesaa! Site na obere vidiyo na-etinye ọdịnaya, ị na-edebe onwe gị n'ọnọdụ nke uche nke ndị na-ege gị ntị, nke ahụ bụ nnukwu ebe ịnọ.
Trezọ nke atọ: Mee Ngwaahịa Dị na Ahịa Google
Ngbanwe ohuru ohuru abughi isiokwu nke otutu ndi na-ere ahia: na-ebugharia ahia na ahia Google. Ndị mmegide na-arụ ụka na ha etinyela ego buru ibu iji wuo ebe nrụọrụ weebụ na-adọrọ adọrọ nke na-egosipụta azụmaahịa na njirimara ha. Usgagharị ngwaahịa na Google na-ewepụ ohere maka ndị ọbịa ịjuanya na saịtị ha zuru oke. Nsonazụ ahụ? Nnukwu ọdịda na ntanetị weebụ.
Ga-ele anya gabiga metric a iji hụ foto buru ibu ebe a. You chọrọ ire ahịa? Ma ọ bụ ị chọrọ nwere a ukwuu-gara website? N'ezie, ịchọrọ ahịa, mana ị nweghị otu ọpụpụ ahịa, ịchọrọ ịmegharị, ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe, ọ bụ ya mere i ji kee ọmarịcha weebụsaịtị, nri? Nri.
Kama ị na - eche banyere Ahịa Google ka ọ bụrụ ọnwụ nke webụsaịtị gị, were ya dịka ọwa ọzọ iji mee ka akara ngosi gị. Ọ bụ ezie na ụdị ndị ọzọ na-agbanwe na atụmanya ịkwanye ngwaahịa na Google ma tufuo okporo ụzọ, ị nwere ike ịbanye na depụta ngwaahịa gị, nweta ahịa, ma bulie akara gị.
Eziokwu ahụ bụ na ị nwere ike depụta ngwaahịa gị ka ịre site na Google naanị na nkeji ole na ole na-eme ka ọ bụrụ ngwa ahịa ahịa dị mfe (na n'efu!) That nweghị ike ileghara anya.
Nke a bụ otu ị nwere ike isi mee ya:
Nke mbu, isi na nke gi Google Akaụntụ Azụmaahịa m, ebe ị nwere ike ịdepụta ngwaahịa gị, nkọwa ngwaahịa, tinye ihe oyiyi ma bido ire n'ime nkeji. N'ezie, ị ga - achọ ịkwalite olu gị, izi ozi na ịkpọ aha gị na weebụsaịtị na ntanetị mgbasa ozi gị. Nke pụtara, ị chọghị ịtụfu hodgepodge nke ndepụta ngwaahịa adịghị mma. Na-emeso Ahịa Google otu ị ga-esi echekwa ụlọ ahịa gị n'ịntanetị ma tinye echiche n'ime onyonyo ahụ, idetuo na nkọwapụta ngwaahịa.
Ndzọ 4: SERPS Favour Schema Markups na Rich Snippets
Ahịa ahịa di n’enweghị mgbagha dabere na SEO (Search Engine Optimization). Na 2020, ị ga - eme karịa ịhọrọ isiokwu dị iche iche ma jiri ederede onyonyo webata websaịtị. Eeh, ị ka kwesiri iji SEO kacha mma, mana ị ga - eme ya ozigbo ma mepụta snippets bara ụba na Schema Markups.
Mpempe akwụkwọ bara ụba nwere microdata, nke a na-akpọ atụmatụ Schema, nke na-agwa ndị ọrụ nyocha ihe websaịtị ọ bụla chọrọ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị banyere “onye na-eme kọfị” n'ime ogwe ọchụchọ Google, kedu nke nsonaazụ ndị a ka ị chere na ndị mmadụ nwere ike pịa:
Nkọwapụta ngwaahịa doro anya, ọnụahịa, ọkwa ndị ahịa, na nyocha
Nkọwa doro anya akọwapụtara na enweghị usoro site na ibe ahụ, enweghị akara, enweghị ọnụahịa, enweghị ozi
Ọ bụrụ n ’ị chepụtara nhọrọ nke mbụ, ị ga - eme ihe ziri ezi. Na 2020, isi engines ọchụchọ, gụnyere Google na Yahoo !, na-amata atụmatụ akara na snippets bara ụba mgbe ha na-adọta SERPs (Nsonaazụ Nsonaazụ Ngini).
Gịnị ka ị ga-eme? Nwere nhọrọ abụọ: jiri Schema.org ike ọgaranya snippets, ma ọ bụ jiri Ngwá ọrụ a na-akwụghị ụgwọ site na Google. Ugbu a, ibe akwụkwọ ngwaahịa gị jupụtara na ozi dị mkpa, nke na-eme ka ọhụhụ nke azụmaahịa gị bawanye.
Ndzọ 5: AI ga-enyere Hyper-Personalization aka
Da dị ka ihe ikuku mmiri? N’ụzọ, ọ bụ, mana nke ahụ anaghị ebelata mkpa ọ dị. Mgbe anyị na-ekwurịta banyere ịhazi ahịa na oghere ahịa, anyị na-enyocha ụzọ iji nye ndị ahịa ndị ọzọ ọpụrụiche.
Ka m dokwuo anya: AI agaghị dehumanize a ika mgbe eji ya n'ụzọ ziri ezi. Kama, ọ ga - enyere aka n'ịmepụta ahụmịhe ndị ahịa na - eme nke ọma. E kwuwerị, ike agwụla ndị na-azụ ahịa na mgbasa ozi na-abụghị onye. Mgbe ị tụlere eziokwu ahụ na mgbasa ozi ebe niile na-emetụta ha 5,000 mgbasa ozi kwa ụbọchị, Ọ dị mfe ịhụ ihe kpatara ike gwụrụ ha. Kama ịtinye na mkpọtụ ahụ, ịnwere ike iji nkà jiri AI rụọ ọrụ nke ọma.
Na mgbanwe na teknụzụ na njupụta nke ngwanrọ AI, ndị ahịa nwere ike ịnweta ndị ahịa ha na ọkwa dị nso. Otu ụzọ kachasị mma iji jiri AI nweta onwe gị bụ ịnakọta data gbasara ọdịnaya ha masịrị ha.
Jiri nlezianya nyochaa nchịkọta weebụ gị na nghọta mgbasa ozi mmekọrịta. Kedu usoro na-apụta? Ikwuputala ndi mmadu ka ha meputa akara na onyonyo nke na agwa ha okwu. N'agbanyeghị nke ahụ, nke ahụ ezughị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ezigbo njikọ maka ndị ahịa.
Ọ bụ ya mere isi ụdị eji AI n'ihi na ya…
Netflix nwere ike ịkọ ihe onye ọrụ ọ bụla chọrọ ile anya dabere na akụkọ ntolite ha.
N'okpuru Armor tailors usoro nlekọta ahụike dabere na ndị ọrụ na-eri nri, ihi ụra na ahụike.
Ndị nkata nwere ike ịjụ ndị ọbịa na Facebook Page gị ma ọ bụrụ na ha chọrọ enyemaka ịchọta otu ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ.
N'okpuru ala: iji nweta hyper-onwe gị na ndị ahịa gị na 2020, ị ga-achọ obere enyemaka site na AI.
Ndzọ nke 6: Nchọgharị Olu Agaghị Agbanwe Ọdịnaya Anya
Nbuli na nyocha olu nwere ndị na - ere ahịa na - agbanwe ọdịnaya nwere ike ịgụta n’ime usoro olu maka igwe na - achọpụta ihe. Nchọgharị olu bụ ihe na-egosi na radar onye ọ bụla, ma ọ bụ nke ziri ezi:
A ga-eduzi ọkara nke ọchụchọ site na olu olu na 2020.
O nwere ike ịbụ ezigbo echiche itinye uche gị na nchọta olu, mana na ịme nke a, emela ka ihie ụzọ nke iche na ọdịnaya ihe ngosi bụ achịcha ụbọchị. N'ezie, ọ dị iche. Achọrọ ihe akaebe? A na-akpọ ya Instagram, ọ nwekwara Onu ogugu 1 kwa oru ndi ozo dị ka nke Jenụwarị 2020.
Ndị mmadụ enweghị ike ịgbagha agbagha hụrụ ọdịnaya anya. Gịnị kpatara na ha agaghị? Na visuals, ha nwere ike:
Mụọ nkà ma ọ bụ ozi dị mkpa maka ọdịmma ha
Gbalịa ntụziaka ọhụrụ ma ọ bụ mepụta nka na nka
Lelee vidiyo na-atọ ọchị ma na-ezi ihe
Chọta ụdị ọhụụ na ngwaahịa
Ọ bụ ezie na ọ dịbeghị mkpa ịgbanwe ahịa anya na 2020, mbata nke echiche ọhụụ nwere ike ịnwa ndị na-ere ahịa ka ha ghara ịmepụta ọdịnaya anya. Nke a na-apụghị izere ezere ga-emebi. Ọ bụ ya mere o ji dị oke mkpa ịgụnye ọdịnaya dị iche iche na-ahụ anya na atụmatụ gị niile.
Iji nyere gị aka, PosterMyWall juputara na oyiyi ulo akwukwo, video ndebiri, na ọtụtụ puku ọrụ e mere ndebiri. Site na sọftụwia imepụta n'efu a, ị nwere ike ịhazi ndebiri site na ịgbanwe ederede, agba na onyonyo iji kwekọọ na akara ngosi gị. Ma ọ bụ, ị nwere ike ịmepụta ọrụ mgbasa ozi mmekọrịta, ihe osise blog, ihe oyiyi ngwaahịa ahaziri iche na akụ nkwado site na ncha na ngwanrọ edezi dị mfe iji.
Echefukwala iweghachi ihe ngosi ndị a iji mee ka ahịa azụmaahịa gị. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịmepụta nkụnye eji isi mee blọgụ ma degharịa ya na pinterest pin ma ọ bụ Instagram post na voila, ị nwere ọdịnaya ọhụụ mara mma maka ọtụtụ ọwa!
Mee Mgbanwe Tech ga-arụ ọrụ maka gị
Na 2020, ị ga-agbanye ụgbụ buru ibu iji weta ndị ahịa, wulite mmata ma bulie azụmaahịa gị. Iji mee nke ahụ, ọ dị mkpa ịnọgide na-agbanwe agbanwe na n'ihu ọnọdụ ndị a. Isi ihe na ọdịnaya ahịa bụ mgbanwe, dị ka ndị ahịa na-eguzogide ọgwụ ịgbanwe ihe ize ndụ ahịa na-agbanwe n'enweghị ha. Ọ bụrụ na ịmeghewanye ma na-eme ihe ọ bụla, ị ga-enwe ike iji ha mee ihe. Na mgbe ị na-eme? Ọfọn, ọ nweghị ịkwụsị gị!
Tags: ahia ahiaomnichannelusoro teknụzụọnọdụ
Christina Lyon bụ onye edemede, blogger na onye egwu si anwụ na-acha SoCal. Ọ na-enwu ọkụ maka inyere azụmaahịa ndị dị n'ịntanetị na-eto site na nnomi ahịa ahịa. Mgbe ọ na-apụ na tebụl ya, Christina nwere mmasị n'ịgụ akụkọ ifo, ịgagharị n'ụsọ osimiri na ịkpọ egwu.
SERP nke oge a: Nlele Anya na Google's Boxes, Cards, Snippets Rich, and Panels
Short.io: Ulo oru White URL Shortener